Maxaa Ka Soo Baxay Shirkii Deg Degaa Ee Uu Lionel Messi Gurigiisa Kula Yeeshay Macalinkiisa Cusub Ee Ronald Koeman? - Gool24.Net
Maxaa Ka Soo Baxay Shirkii Deg Degaa Ee Uu Lionel Messi Gurigiisa Kula Yeeshay Macalinkiisa Cusub Ee Ronald Koeman?
August 20, 2020 Mahamoud Batalaale
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa soo gaabiyay fasixii uu ku jiray kadib markii shaqada tababaranimo ee kooxdiisa loo magacaabay Ronald Koeman wuxuuna Messi banaanka keenay go’aanka uu qaatay.
Idaacada laga leeyahay Catalonia ee RAC1 oo ka mid ah warbaahinta xogta badan ka bixiya kooxda Barcelona ayaa hadda lagu shaaciyay in Lionel Messi uu macalinka cusub ee Ronald Koeman u sheegay in fursada uu kooxda ku sii joogayaa ka yar tahay in ta uu banaankeeda uga baxayo.
Markii uu Lionel Messi ku soo laabtay magaalada Barcelona waxa gurigiisa ugu yimid macalinka cusub ee Ronald Koeman kaas oo xidiga reer Argentina u sharaxay mashruuciisa iyo waxa uu doonayo in uu sameeyo balse jawaabta uu Messi kala kulmay ayaa noqotay mid niyadjab leh.
Messi ayaa Ronald Koeman u sheegay in waqti xaadirkan uu banaanka kooxda uga dhaw yahay gudaha kooxda taas oo uu ku cadeeyay in uu ka niyadjabsan yahay xaalada kooxdu ku jirto.
Warkan cusub ee hadda soo baxay ayaa lagu yidhi: ” Lionel Messi waxa uu Ronald Koeman u sheegay in uu mustaqbalkiisa u arko mid in badan banaanka ka ah Barcelona marka loo barbar dhigo in uu kooxda la sii wato, laakiin waxa uu qirtay in xaalada heshiiskiisu ay wax sii adkaynayso”.
Warkan ayaa lagu sheegay: “Leo Messi waxa uu xidhiidh la sameeyay Koeman ee ujeedadiisa xili ciyaareedka soo socda kadib markii uu galinkii danbe ee maanta shir ka qabsoomay guriga ciyaartoyga”.
Arimihii uu Koeman kala hadlay Messi ayaa lagu yidhi: “Shirkan waxa uu Koeman ku sharaxay mashruuciisa, waxayna RAC1 ogaatay in xidiga reer Argentina uu macalinka reer Holland ku war galiyay ujeedadiisa xili ciyaareedka soo socda”.
“Waqti xaadirkan Leo Messi mustaqbalkiisa oo cadaan ah uma arko Barca. Waxa uu ciyaartoy cadho ka muujiyay xaalada kooxda ee kadib guuldaradii kulankii Bayern Munich ee 8-2 ahaa, xaqiiqdii waxa uu isagu isku arkaa mid waqti xaadirkan banaanka kooxda in badan uga dhaw gudaha kooxda”. ayaa warkan la sii raaciyay.
Laakiin waxaa warkan lagu sheegay in arinta ugu wayn ee Lionel Messi haysataa ay tahay nooca heshiiska uu kooxda kula jiro laakiin kulankii ugu horeeyay ee dhex maray Messi iyo macalinka cusub ee uu Bartomeu magacaabay ee Koeman ayaa qalalaase kale sii abuuraya.
Xidhiidhka Lionel Messi iyo Bartomeu ayaa burbur ahaa ugu dhawaan labadii sanadood ee ugu danbeeyay waxayna u muuqataa in kabtanka reer Argentina uu magacaabista Koeman ee Barca u arko mid aan xaalada kooxda badalayn oo uu ka door bidayo in uu ka baxo.